कोभिड अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो « KBC khabar
कोभिड अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो
२५ पुष २०७८, आईतवार २०:२३
काठमाडौं, २५ पुस । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा कोभिड बिरामीको चाप बढेको छ । पछिल्ला दिनमा कोभिड अस्पतालमा बिरामीको संख्या दोब्बर बढेको कोभिड केन्द्रीय अस्पतालका सीईओ डा. भुपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको हो ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै डा. बस्नेतले कोभिड अस्पतालमा संक्रमितको संख्या दोब्बर भएको बताउनुभयो । ‘केन्द्रीय अस्पतालले समन्वय गर्दै आएका देशभरका कोभिड अस्पतालमा संक्रमितको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ’, डा. बस्नेतले भन्नुभयो ।
संक्रमणबाट जोगिन जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र सतर्कता अपनाउन डा. बस्नेतको सुझाव छ ।